Abazali Abangenamaqabane: Unako Ukuphumelela!
“Ndiye ndivuye gqitha xa iintombi zam ezimbini zinditsibela ngokundanga zize zithi, ‘Siyakuthanda Mama.’”—UANNA UMAMA ONGENANDODA EPOLAND.
“Ndiye ndaneliseke xa ndibona abantwana bam bebonisa indlela abazixabisa ngayo izinto endibenzela zona. Bakhe bandiphe izipho ezincinane, njengemifanekiso abayizobileyo. Awukho umbulelo onokundivuyisa ukodlula lo.”—UMASSIMO, UTATA ONGENAMFAZI EITALI.
“Ndikhe ndithi ndisakhathazekile, suke omnye koonyana bam andange aze andixelele indlela andithanda ngayo.”—UYASMIN, UMAMA ONGENANDODA EMZANTSI AFRIKA.
LE YEMINYE yemizekelo yamazwi afunyanwe nguVukani! kubazali abaninzi abangenamaqabane kuhlolisiso oluye lwenziwa kumazwe ngamazwe. Abazali abaninzi abangenamaqabane, inkoliso yabo ngoomama, banomnqweno wokufumana amaqabane anothando anokubaxhasa. * Noko ke, amazwi abo okunyaniseka atyhila nokuba bayakwazi ukumelana nemeko abakuyo.
Yintoni eye yanceda aba bazali bangenamaqabane baphumelela ekujamelaneni nolu celomngeni lunzima? Kula manqaku, siza kuxubusha amacebiso ngezinto ezininzi eziye zabanceda nangezo bazivuma ngokunyaniseka, kuquka imigaqo ebalulekileyo esoloko ibanceda. Ukuba ungumzali ongenaqabane, sinethemba lokuba la manqaku aza kukunceda kungekuphela nje ekubeni uphumelele kodwa nasekubeni ufumane uvuyo nolwaneliseko. Le nto, ayinakwenzeka lula kweli hlabathi litshintsha ngokukhawuleza nelingaqinisekanga. *
Eli nqaku liza kuthetha ngezinto ezintandathu. Indlela abazali abangenamaqabane
Abanokufumana ngayo inkxaso
Abanokukwazi ngayo ukuthetha ngokukhululekileyo nabantwana babo
Abanokuzazi ngayo ezona zinto zibalulekileyo
Abanokubeka ngayo imida kwindlela yokuziphatha
Abanokumisela ngayo imilinganiselo efanelekileyo
Abanokuqinisekisa ngayo ukuba uThixo uyahlonelwa ziintsapho zabo
^ isiqe. 5 Ehlabathini lonke, inkoliso yabazali abangenamaqabane ngamabhinqa—nto leyo ebonakalayo kolu ngcelele lwamanqaku.
^ isiqe. 6 Imigaqo emininzi ekolu ngcelele inokunceda neentsapho ezinabazali ababini.